Ithegi: ukuqala | Martech Zone
Ividiyo: Ukulungiswa kweinjini yokukhangela iziQalo
NgeCawa, nge-13 kaJanuwari 2013 NgeCawa, nge-13 kaJanuwari 2013 Douglas Karr
Ekugqibeleni ufumane ukuqala kwakho emhlabeni kodwa akukho mntu unokukufumana nasiphi na isiphumo sokukhangela. Kuba sisebenza ngeziqalo ezininzi, lo ngumcimbi omkhulu… iwotshi iyaluphawula kwaye kufuneka ufumane ingeniso. Ukufunyanwa ekufuneni kuqoqosho ngakumbi kunokuqesha iqela eliphumayo. Nangona kunjalo, uGoogle akanobubele kakhulu kwisizinda esitsha. Kule vidiyo, uMaile Ohye ovela kuGoogle uxoxa ngento onokuyenza
NgoMgqibelo, Matshi 8, 2008 NgoMgqibelo, Oktobha 20, 2018 Douglas Karr
Ndibuze umbuzo kuBuza abantu abangama-500 abafumene impendulo enomdla. Umbuzo wam ibikukuba: Ngaba iikholeji ziindlela ezilungelelanisiweyo zokudlulisa ukungazi ukusuka kwesinye isizukulwana ukuya kwesinye? Kuqala, mandichaze ukuba ndawubuza lo mbuzo ukuze ndiveze impendulo- ibizwa ngokuba yi-link-baiting kwaye iyasebenza. Ezinye zeempendulo endizifumene kwangoko bezikhohlakele, kodwa ukuvota kukonke kube nefuthe. Ukuza kuthi ga ngoku, iipesenti ezingama-42 ze